Ikhompyutha umdlalo GTA 5 ukhululiwe ukuze umphakathi ngo-2013, kodwa kube kutholakala kuphela amageyimu. PC abadlala kwadingeka alinde isikhathi sakhe isikhathi eside futhi eminyakeni nesigamu, kodwa ngo-2015, kodwa consummated release, futhi wonke umuntu ithole ithuba ukudlala wobuciko ngempela. Ngokungafani iziqephu langaphambilini, lapha uyamenywa ukudlala hhayi ngohlamvu olulodwa, futhi nje ngemuva ezintathu - ungaba ezindaweni ezintathu ngesikhathi esisodwa, okwandisa ukusebenza kahle yakho. Phawula futhi ukuthi ezinye izinhlamvu akakhiphanga umsebenzi iqhawe ethile noma imisebenzi ukwehluka. Ngokuvamile, singaba usizo kabi GTA 5 ndima - okuyingxenye 1 uzobe achazwe kulo magazini, njengoba kubekiwe ngangokunokwenzeka, ukuze ukwazi ukuhambisa lwendaba ngaphandle kwezinkinga.
Ngakho, sekuyisikhathi ukuchaza ukudlula GTA 5. Ingxenye 1, okuyinto kungabuye ngokuthi umsebenzi noma inhloko, akuyona okwamanje, futhi eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule. Wena uzodlalela ezimbili izinhlamvu ezintathu okuzotholakala kuwe okunye kanye ukudlula. Michael noTrevor, kanye Brad kukhona abaphangi, futhi kufanele zokushintsha Michael ngesikhathi kunesigameko sokuphanga isimiso. Uzodinga ukuba sneak zibe ngemuva ibhange, ukwenza wonke ulale phansi bese musa ukuhambisa, bese wenza isendleleni eya esitolo, ngesikhathi kuqhunyiswa i umnyango futhi sithathe imali, abangaphakathi. Nokho, uma ushiya isakhiwo ibhange, uyobe kakade elinde amaphoyisa, okuyindawo uzodinga ukudubula. Lapho omunye wabo evula esinye isicabha wahlwitha uMichael, ukulawula kuzodlula ukuba Trevor, ngoba lapho uzoba shot kahle okuhloswe nyá usongo. Khona-ke, qhubeka ukubaleka, uMichael engabuzwa ubuhlungu. Udinga uzama ukumenza i Trevor, kodwa awazi aphumelele, njengoba izimoto armored ngeke asondele FBI, ukuze wonke awusenalo - iwukuba ukubaleka. Kungenxa nalesi sabelo bese iyaqala labona GTA 5, Ingxenye 1 kuphela izinkinga ezengeziwe kwesiqinti, ngoba uyobe bajwayelane elinye iqhawe.
Franklin kanye Lamar - ukuqeqeshwa
Yini kukulungiselela GTA 5 ndima? Ingxenye 1 iphelile, sekuyisikhathi ukudlulela mission yesibili, okuyinto kuzoba uhlelo ukuqeqeshwa. Kuyo uzothola uhlamvu lwesithathu, Franklin, ngubani, kanye uzakwabo Lamar bekulokhu ndaba kunalokho amnyama - bona ngawakhamela imali kulabo abangakwazi ukukhokha izimoto ukuthi bathengwa umqashi wazo. Noma ukucosha izimoto, uma imali iklayenti kungaqali, kodwa noma kunjalo, iklayenti esiyithola yakhe. Yiqiniso, amaphoyisa ungathandi, ukuze kule mission une agqashule ekusebenzelaneni jaha amaphoyisa. Phakathi uhlanga, uzofunda konke izinto eziyisisekelo ukuphathwa, ufunde mayelana namakhono akhethekile, funda phuma bese ufihle kusukela amaphoyisa nokunye, niyakuba ufuna ukuza ekhaya lakhe - lapho futhi ufunde basindiswe kanjani, ushintsho ubuyisele nempilo. Njengoba ungacabanga, lokhu kungakusiza nawe ikhodi GTA 5 ku-PC, kodwa kungcono ukusebenzisa izindlela evamile ukuze bakwazi ukuqedela umdlalo 100%.
Ungasebenzisa amakhodi GTA 5 ku-PC miss cishe zonke izabelo futhi ujabulele imodi mahhala, kodwa uma unentshisekelo kuyinto umkhankaso indaba, akukuhle ukusebenzisa aphambe. Okokuqala, aphange kwakho kujabulise nakakhulu umdlalo, kanti okwesibili, awukwazi ukuthola izindondo zegolide kanye izimpumelelo, udinga ukuqedela umdlalo amaphesenti ayikhulu. Ngakho, ngemva umsebenzi ukuqeqeshwa kuqala drive wangempela, kodwa kuze kube manje okwamanje wokugcina. Iqiniso lokuthi umsebenzi odlule ilinikile umqondo oluyisisekelo okulindele wena ngokuya control imoto, futhi manje uyofunda ngalokho okulindele wena uma usuphelelwe imoto. Uqaphela umsebenzi engcono lwenyanga, bese wathumela eyolanda ibhayisikili okuyiwona umthengi engazange ikhokhwe isenti, nakuba iye yazuza isikhathi eside impela. Udinga ukuba indoda ifinyelele eqophelweni yendawo, ukuya endaweni ikhasimende, lapho uzothola isibhamu - ke usunayo ukudubula lalitshela, nishaye imoto yabo futhi uhambe siphishekela Umthengi we ibhayisikili, ngokudubula kuye sendleleni. Buyela libhayisikili - futhi lokhu ukuqeqeshwa yakho iphela. Njengoba ubona, awudingi aphambe GTA 5 ku-PC ukuze uthole injabulo Gameplay.
Esinye isizathu sokuba singalisebenzisi aphambe GTA 5 ku-PC ohambweni lokuqala wukuthi nje ungakabi waqoqa yonke izinhlamvu, okuyiwona ungadlala esikhathini esizayo. Lapho labetibambile senzakalo kwesibhamu? Awu, lekucala lekufundza ngentsandvo uMikayeli Franklin, hhayi ngaphansi kwezimo ezimnandi kakhulu. Iqiniso lokuthi Franklin ngeke komsebenzi - eyolanda Suv, wathenga uJames de Silva. Kunengqondo nomsebenzi olula, kodwa wena isimanga. Ukuze uqale, iya endlini kaJakobe, wade kwimodi ethule cwaka ngaphakathi eyolanda okhiye buthule, ahlale emotweni futhi ubuyele emuva salon, okuyinto wena umsebenzi. Kuyini ukumangala kuyinto? Iqiniso lokuthi uJakobe - kuyinto indodana kaMikayeli, kanye hero sonke isikhathi elele esihlalweni ngemuva imoto. Uyawavimbela isibhamu ethempelini lakhe ngaphambilini Franklin ukungena ifasitele lomkhumbi gumbi. Ngemva kwalokho, ukulawula sihamba Michael, futhi udinga ukuba alungise e Melee nazo zonke izingcweti salon. GTA 5 phezu Russian zonke ukuthi lokhu kuhambisana nokubuka dubbing kakhulu, ukuze uthole okuningi injabulo.
Njengoba wazi, GTA 5 ngesiRashiya it kwakuzwakala ngokuphelele konke, ngakho uma ungazi English, uzowathola kangcono konke ngesikhathi esisodwa ukuze uthole kwasendaweni ngoba mpendulwano adlala indima ebaluleke kakhulu. Ngakho manje Michael Franklin futhi ajwayelekile, futhi Franklin ekutshela Michael ngezinkinga zabo, ngoba lelo eyingoduso kanye nezenzo zakhe ebumnyameni. Michael uyaqonda futhi uyavuma ukusiza, kodwa kuqala udinga ukuba uphume ezisicasulayo indodana UMichael, owayedla phakathi nalesi sikhathi kwadingeka ukuba ezizama ukuthengisa lalesi sikebhe. Ihamba abathengi wathatha, kodwa akazange ufuna ukudlulisa imali. Ngakho manje uMikayeli Franklin baye ekuphishekeleni enqoleni, elisusa isikebhe. Uyothola pretty okuningi drayvovyh zikhathi futhi umbono umxhwele, kodwa lokhu ngenxa yokuthi imoto yakho iphuka kule embi kakhulu isikhathi kungenzeka. Ngakho ukuya esitolo, lapho uyokwazi ukuvuselela imishini GTA 5, uMichael uhambe ekhaya.
Nakuba Franklin Itholakala workshop nokulungisa imoto GTA 5, uMichael iza ekhaya. Akubona lapho? Umkakhe, u-Amanda embhedeni ukuzijabulisa Umqeqeshi wakhe ithenisi. Ethukuthele, uMichael uqala umsebenzi wokufuna ukuba villain, okuyinto luphele mansion elikhulu ocebile. Nokho, amehlo uhlamvu yakho nokufutheka lethu lifihlakele, ngakho ephenduka imoto ibe ziyalungiswa ngumuntu ikholomu abese ebhubhisa endlini. Ngokushesha Kuhambe "izigcwelegcwele" endawo, njengoba kuboniswa inxuluma Kwakungelula, futhi kungeyakho izidakamizwa nkosi. Franklin isivele lapha, uthatha uMichael, futhi ndawonye baqhubeka lihamba kude jaha, siqhumisa kusukela abawasukelayo yakhe. Kodwa lokhu Yiqiniso, akugcini lapho - ngakho nje kusuka izidakamizwa kwezicebi musa iphele. Mansion kuwufanele ezimbili zamadola eziyisigidi nesigamu, nokuthi Michael uzobuya. Nokho, uMichael kuyasiza Franklin nezinkinga zakhe, Franklin uzokhokha kuye okufanayo, manje lezi namaqhawe ezimbili zibambene. Kodwa kanjani uthole imali? Ngokwemvelo, usebenzisa kuhlonyiwe, okuyinto uMichael futhi ezingelwa eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule. Lapha uqala umdlalo egcwele GTA 5 - Ingxenye 1 ikulethela yokuthi ngesakhiwo kuyogxila kuhlonyiwe, njengawe e umkhankaso wokuqala.
Njengoba kushiwo ngaphambili, ngawo GTA 5 ungalawula ezingu ezintathu, kodwa ngezinye izikhathi lo mthetho izoba ngaphansi okuhlukile. Ngokwesibonelo, njengoba kule "Chop" Umsebenzi, okuthiwa ngakho ngenxa yokuthi it has a Rottweiler okuthiwa i-Chop. Njengoba ungase ukuqagela, ngiwo, futhi ungaphatha. Empeleni, wonke ngokuyisisekelo lokhu elizimisele ukuphishekela Ela Di Napoli leqembu lezigebengu - yokuqala okudingeka uyenze ke ngemoto ke ngezinyawo, bese ngosizo inja. Mission GTA 5 lizoqala ukuthatha ifomethi obungajwayelekile, ngakho akufanele simangale kakhulu lapho kuzodingeka ulinde ukumangala okunjalo.
Ukuthunywa esilandelayo sizobe ngempela ezithakazelisayo futhi lizoxhunywa Michael izingane. Ekuqaleni kufanele smash TV James, owachitha sonke isikhathi sakhe esikhululekile edlala imidlalo ye-computer, futhi ibonisa akazihloniphi uyise. Ukuze ukhululeke, ikhanda ukuze wonke inkampani ogwini, lapho abayohlanganyela ukuba pier phezu emabhayisikili. Lapho, uMichael efunda kulokho okusuke indodana yakhe ukuthi indodakazi yakhe ivuliwe yacht eduze - ke bayengelwa khona ukuthatha izithombe alusilo ehloniphekile. Yiya isikebhe bese uhlela ukubhukuda khona disassembly, bese sifinyelele kwi ibhayisikili amanzi uqala kude, siqhumisa kude abawasukelayo yakhe. Buyela emuva ebhishi ukuqedela lo msebenzi.
Nokho, lokho usezofika ekupheleni ingxenye yokuqala umdlalo. Umsebenzi wokugcina kule ingxenye kuyoba ukuthola Leicester nokumisa nabo. Leicester - lokhu kuyinto umngane Michael ubudala, owasiza uhlele yonke le mikhuba ukuthi Michael wenza eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule. Manje, uMichael bazodinga usizo lwakhe ukuqoqa emibili nengxenye amaRandi ayisigidi.
Iyunithi ulimi. amayunithi Ulimi isiRashiya - kungcono isiRashiya ...
Yiziphi amavithamini adingekayo ukuze abe namandla namandla
Thenga Iphone 4 bu